“Raharaha volamena 73,5 kg”: fandikan-dalàna faratampony amin’ny fadintseranana | NewsMada
“Raharaha volamena 73,5 kg”: fandikan-dalàna faratampony amin’ny fadintseranana
Nivoaka amin’ny fanginany ny fadintseranana malagasy momba ilay “Raharaha volamena 73,5 kg” tratra tany Afrika Atsimo. Samy nitondra fanazavana momba iny raharaha iny ny tale jeneralin’ny fadintseranana, i Lainkana Zafivanona Ernest, sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Ny 31 desambra 2020 ihany, nampahafantatra ny fadintseranana malagasy ny any Afrika Atsimo amin’ny fisian’ny volamena 73,5 kg avy aty Madagasikara tratra ao aminy. Fiaramanidina manokana ny nitondra io volamena io avy any Toliara, ho any Afrika Atsimo, ary voalaza fa saika hitondra izany any Dubaï. “Satria 1 janoary voalohan’ny taona, ny 2 janoary, nitohy ny fanadihadiana, tsy mijanona eto Madagasikara ihany fa manao koa ny any Afrika Atsimo sy any Mali”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany, i Lainkana Zafivanona Ernest. Marihina aloha fa nisy taratasy hosoka hita amin’ny antontan-taratasy iray milaza fa avy any Mali io volamena io.
Fa ny tena nasongadina ny fandikan-dalàna ao amin’ny fadintseranana, fandikan-dalàna faratampony ny tsy fanambarana ny entana hoentina, ny fanondranana antsokosoko; fandikan-dalàna faratampony ny varo-maizina tsy mampidi-bola ho an’ny fanjakana. Tsy nisy fepetra noraisin’ny fadintseranana noho ny tsy fisian’ny fanambarana tonga tany aminy, mialoha ny hamoahana ny entana. “Araka ny lalàna, tsy maintsy ampandrenesina, 24 ora mialoha ny hamoahana sy ny hampidirana entana, ny tompon’andraikitra. Tsy nisy izay fampilazana izay”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany. “Efa nomanina iny, ny tany Toliara koa, tsy nisy fepetra ara-dalàna noraisina”.
Nametraka fitoriana voalohany
Noho ireo rehetra ireo, ny fadintseranana no nametraka fitoriana voalohany eny amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly (Pôle anti-corruption), sy nanondro ireo olona nahiahina. Ny fadintseranana ihany koa no nitazona ilay fiaramanidina nitondra volamena. Efa eo am-pelatanan’ny Fitsarana ny raharaha, ireo voatazona any Afrika Atsimo kosa, nahemotra amin’ny 1 febroary ny fitsarana azy ireo. Manampy ny fanjakana foibe ny fadintseranana amin’ny famerenana ireo volamena ireo. “Tsara ho fantatra fa izay volamena tratran’ny fadintseranana, apetraka any amin’ny Banky foibe”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany.